Olee otú Mee A Foto dị ngosi mmịfe on Mac / PC
> Resource> Atụmatụ> Olee otú Mee a Foto dị ngosi mmịfe na Mac / PC
Gbara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke foto gị na ezinụlọ gị njikọghachi ma ọ bụ ụbọchị ọmụmụ ọzọ ma na-achọ na-egosi ha anya ka gị na ezinụlọ gị na ndị enyi? Gịnị ma i mee a foto ngosi mmịfe iji na-adọta ndị mmadụ anya? Nanị ole na ole clicks mgbe ahụ, otu anya-akụta ngosi mmịfe e mere, ọ bụrụ na ị na-enwe ezi foto ngosi mmịfe onye dị ka DVD Slideshow Builder Deluxe. Ọ na-enye ihe karịrị 480 amamiihe 2D na 3D ngosi mmịfe ndebiri ngwa ngwa na-mfe ime mara mma slideshows. Na otu ugboro mere, dị iche iche mmepụta nhọrọ na-nyere ịzọpụta gị foto slide show. Ebe a ka anyị hụ otú na-eme ka a foto ngosi mmịfe nzọụkwụ site nzọụkwụ.
1 Import foto / video faịlụ n'ime foto ngosi mmịfe onye
Ẹkedori ndise ngosi mmịfe software na e nwere abụọ ụdịdị ị nwere ike họrọ:
Standard mode: ị nwere ike họrọ a tupu-e foto ngosi mmịfe ịke si ọtụtụ ka kama izubandu foto gị;
Advanced mode: Ị nwere ike hazie image ngosi mmịfe na ụdị egwu ikwu n'ụzọ, mmetụta, Akara ókwú na ndị ọzọ.
Ebe a na-ewe Advanced Mode ihe atụ. Na interface, pịa otu nke abụọ Add Files buttons ịgbakwunye gị foto na vidiyo. Mgbe ahụ ịdọrọ na dobe ka ndokwa iji. Ọ bụrụ na photos mkpa edezi, pịa "Dezie" button ma na-eme ihe ọ bụla ị chọrọ welie photos.
2 hazie na mgbanwe, music na captions
Wee pịa "hazie" taabụ gbanwee gị onwe gị foto show. Ka ihe atụ, abụọ pịa dị photos ịgbakwunye captions ma ọ bụ pịa Voice N'ime button n'elu akụkọ osisi na-agwa foto akụkọ na gị onwe gị voice.Detailed Ama: User Guide nke DVD Slideshow Builder Deluxe
3 Preview na Mepụta
Mgbe customization, pịa Mepụta taabụ, ifiọk na-azọpụta gị foto ngosi mmịfe dị ka gị mkpa. Ị nwere ike:
Kpọmkwem ọkụ ndise ngosi mmịfe ka DVD site na ịpị "Ọkụ ka DVD" na ekpe sidebar.
N'otu ntabi bulite show ka YouTube site n'ịhọrọ "Share ka YouTube" nhọrọ, ọ dịghị mkpa na-ahapụ foto ngosi mmịfe usoro.
Chekwa na HD video nke bụ dakọtara na gị iPad, iPhone, Apple TV na ndị ọzọ.
Mere. Ọ bụghị ya mfe ime a foto ngosi mmịfe? Ikwu n'okpuru ọ bụrụ na ị nwere echiche ọ bụla banyere nke a.